အိမ်ကမိန်းမထက် ဆိုးလ်ရှားကိုပိုချစ်ပေးမယ့် ယူနိုက်တက်တာဝန်ရှိသူများ…. – Sport Gaber
အိမ်ကမိန်းမထက် ဆိုးလ်ရှားကိုပိုချစ်ပေးမယ့် ယူနိုက်တက်တာဝန်ရှိသူများ….
ပရီးမီးယားလိဂ် အင်အားကြီးအသင်း တသင်း ဖြစ်တဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ ပိုင်ရှင် မိသားစု ဖြစ်တဲ့ ဂလေဇာမိသားစု ကတော့ လတ်တလောမှာ ရလဒ်တွေ ဆိုးဝါးနေတာကြောင့် ဖိအားတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ နည်းပြဆိုးလ်ရှားကို ရာထူးကနေ ထုတ်ပယ်ဖို့ မစဉ်းစားသေးကြောင်း ဗြိတိန် အခြေစိုက် သတင်းဌာနတွေက အခိုင်အမာ ဖော်ပြသွားကြပါတယ်။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ဆိုးလ်ရှားရဲ့ လက်ထက်မှာ စုစုပေါင်း ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင် ၃၀၀သန်းကျော် သုံးစွဲကာ အသင်းကို အင်အားဖြည့်တင်းထားပေမယ့် ဆုဖလား တလုံးမှ ရယူထားနိုင်ခြင်း မရှိသလို ယခုနှစ် ဘောလုံးရာသီမှာလည်း အသင်းရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်က အတော်လေး ကျဆင်းနေပါတယ်။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ နောက်ဆုံး ကစားခဲ့တဲ့ ၇ပွဲမှာ ၂ပွဲသာ အနိုင်ရထားပြီး ၁ပွဲသရေနဲ့ ၄ပွဲ ရှုံးနိမ့်ထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အနိုင်ရထားတဲ့ ပွဲစဉ်၂ပွဲကလည်း နောက်ဆုံးမိနစ် ပင်နယ်တီ ကာကွယ်မှု ၊ နောက်ဆုံးမိနစ် အနိုင်ဂိုးတို့ကြောင့် နိုင်ခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ပဲ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ ပရိသတ် အများအပြားနဲ့ ဘောလုံးရေးရာ သုံးသပ်သူတို့က မန်ယူအသင်းအနေနဲ့ ဆိုးလ်ရှားကို ရာထူးကနေ ထုတ်ပယ်သင့်ပြီလို့ တိုက်တွန်းနေကြပြီး မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်ရဲ့ ကစားသမား တချို့ကလည်း အသင်းတွင်းမှာ အပြောင်းအလဲတွေ ပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်နေပြီလို့ စတင် ထောက်ပြလာကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် နာမည်ကြီး သတင်းဌာန တခု ဖြစ်တဲ့ The Athletic သတင်းဌာနရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ ဘုတ်အဖွဲ့နဲ့ ပိုင်ရှင် ဂလေဇာမိသားစုတို့ဟာ ဆိုးလ်ရှားကို ဆက်လက် ထောက်ခံနေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း သိရပြီး မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အနေနဲ့ လာမယ့် ပွဲစဉ်တွေမှာ ရလဒ်ဆိုးတွေ ဆက်တိုက် ကြုံတွေ့မှသာ ထုတ်ပယ်ဖို့ စတင် စဉ်းစားဖွယ် ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ လာမယ့်အပတ်မှာတော့ အိမ်ကွင်း အိုးထရက်ဖို့ဒ်မှာ လီဗာပူးအသင်းကို ဧည့်ခံ ကစားရဖို့ ရှိနေပါတယ်။
Previous Article မန်ယူအသင်းရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကို စပယ်ရှယ်ပလန်နဲ့ ထိထိမိမိ ဒဲ့ဆော်လိုက်တဲ့ – ဂယ်ရီနဗီးလ်
Next Article နို့တိုက်နေရင်ကိုက်လိုက်တဲ့ ကလေးလေးကို မိခင်ဖြစ်သူမှ ကပ်ကြေးဖြင့် အချက်ပေါင်း (၉၀)ထိုးသွင်းမူဖြစ်ရပ်